Ukuphuma njani kwiTelegram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ukuphuma njani kwiTelegram?
Epreli 26, 2021 0 IiCententarios 332
Vala zonke iiseshoni kwiTelegram ngala manyathelo alula kwaye akhawulezayo esikubonisa apha ngezantsi. Alithandabuzeki elokuba esi sicelo sokuthumela imiyalezo yenye yezona zilungileyo kwaye zisetyenziswa kakhulu ngalo mzuzu, yiyo loo nto kubalulekile ukuba wazi ukuba usebenza njani.
Namhlanje sifuna ukukufundisa ezinye zeendlela ezifanelekileyo nezilula zokungena kwiTelegram. Ngamanye amaxesha sivula usetyenziso kwizixhobo ezingaziwayo kwaye silibale ukuphuma, oko kubonisa ingozi enkulu kukhuseleko lwethu nakwimfihlo.
Funda ukubona zonke iiseshoni ezivulekileyo zeTelegram
Kukho abasebenzisi abangakagqibi ukuyazi yonke imisebenzi yeTelegram kwaye omnye wabo unento yokwenza ne ukubanakho ukuba nenani leeseshoni ezivulekileyo esizifunayo.
Akukho mda, oko kukuthi ungasivula isicelo kwifowuni kwaye kwangaxeshanye uvule enye kwikhompyuter, ngaphandle kokuvala. Icala elisezantsi lokwenza oku kukuba singalibala apho singene khona.
¿Awunalo nofifi lokuba zingaphi iiseshoni ozivulileyo? Kukho isisombululo soku kwaye sixelela amanyathelo ekufuneka uwalandele:
Okokuqala kufuneka vula isicelo kwiTelegram. Ukuba awunayo ifakiwe, unokuyikhuphela simahla nakweyiphi na ivenkile ekwi-intanethi.
Nje ukuba ungene ngaphakathi kwesicelo kuya kufuneka uyenze Cofa kwimivumbo emithathu ethe tye ezibonakala ngasentla ngasekhohlo.
Khetha ukhetho lwe "Useto"
Emva koko cofa ukhetho "Ubumfihlo nokhuseleko"
Ngoku kufuneka ukhethe "Iiseshini ezisebenzayo".
Ilungile. Yinto elula ukuba ungazazi zonke iiseshoni ezivulekileyo zeTelegram. Ngoku into ekufuneka uyenzile kukuvala ezo ungazisebenzisiyo. Ukuba awazi ukuba ungayenza njani, naka icandelo elilandelayo apho sikuchazela yonke into.
Vala iiseshoni zeTelegram ozifunayo
Sifikelele kwinto enomdla kuthi: Funda indlela yokuphuma kwiTelegram, kwaye ukunyaniseka, yinkqubo engadingi mzamo okanye lwazi oluninzi. Nabani na onokuyenza ngokulandela amanyathelo ambalwa.
Vula isicelo Yocingo evela kwifowuni yakho okanye ikhompyutha
Yiya kwimenyu ephambili. Ungayifumana ngokucinezela imitya emithathu ethe tyaba engasentla ngasekhohlo.
Khetha ukhethoUseto lweapp"
Ngoku kufuneka ucofe ukhetho "Ubumfihlo nokhuseleko"
Inyathelo elilandelayo iya kuba kukukhetha apho ithi "Iiseshini ezisebenzayo"
Ekuphela kwento eseleyo kukucofa ukhetho "Vala zonke ezinye iiseshoni".
Njengoko siyibona yile inkqubo elula esinokuyenza nanini na. Ekuphela kwento esiyifunayo yifowuni okanye ikhompyuter kwaye kufuneka sibhaliswe kwisicelo.
Ukulandela la manyathelo alula Kwimizuzwana embalwa siza kube sivale iseshoni nganye yeTelegram ebesiyivulile. Ngale ndlela sinokuqiniseka ukuba akukho mntu uya kuhlola ulwazi lwethu, kwaye ke siphephe iimeko ezingathandekiyo.
Khumbula into: Ukungena ngemvume ngalo lonke ixesha kukwenza ube sesichengeni kakhulu.
1 Funda ukubona zonke iiseshoni ezivulekileyo zeTelegram
2 Vala iiseshoni zeTelegram ozifunayo
Ndifuna ukutshintsha igama lam kuFacebook, ndenza njani?